Sanduuqa kaydinta bamboo ee ugu fiican ee afargeeska ah waxay ku kaydin kartaa waxyaabo kala duwan munaasabad kasta soo saaraha iyo Warshada | Bambo dheer
Sanduuqa kaydinta leydi-xagalka ee Bamboo waxa uu kaydin karaa walxo kala duwan wakhti kasta
[Qiyaamo kala duwan]: Sanduuqan kaydinta ayaa si buuxda u dabooli kara baahiyahaaga nolosha, waxaana lagu soo saari karaa hadba baahidaada.
[Waara oo soo jiidasho leh]:Bamboo si dhakhso ah u koraa oo waara. Waa shay adag oo loo isticmaali karo sidii miis, miiska sariirta, shelf bandhiga iyo qurxinta guriga ee qolka fadhiga, qolka jiifka, jikada iyo musqusha.
[Waara oo soo jiidasho leh]: Bamboo si dhakhso ah u koraa oo waara. Waa shay adag oo loo isticmaali karo sidii miis, miiska sariirta, shelf bandhiga iyo qurxinta guriga ee qolka fadhiga, qolka jiifka, jikada iyo musqusha.
[Sida loo isticmaalo]:Isticmaal hadba baahidaada; qolka jiifka, waxaad ku dhejin kartaa dahabka (sida silsiladaha iyo giraanta), waxaadna habeyn kartaa waxyaabaha la isku qurxiyo (sida ciddiyaha iyo lipstick); qolka fadhiga, waxaad ku dhejin kartaa cirbadaha, dunta iyo spools; Xafiiska dhexdiisa, waxaad dhigi kartaa qalimaan, xargaha xaashida iyo suunka. Jikada dhexdeeda, waxaad ku kaydin kartaa dhalooyinka xawaashyada, alaabta miiska, koobabka, dhammaan cuntooyinka fudud ee aad jeceshahay - baararka tamarta ama baararka borotiinka, granola ama buskudka dhadhanka isku dhafan, buskudka ama buskudka, sidoo kale way fududahay in la kaydiyo sahayda dubista. Waxa lagu ridi karaa khaanad ama miiska dushiisa.
[Tayada Sare]:100% tayada sare leh sanduuqyada kaydinta bamboo waa dabiici, la cusboonaysiin karo iyo beddelaad waara, kuwaas oo bedeli kara sanduuqyada qurxinta alwaax iyo sanduuqyada kaydinta khaanadaha. Bamboo waxay iska caabin dabiici ah u leedahay wasakhda, urta iyo bakteeriyada, mana aha waxyeello deegaanka. Way fududahay in lagu nadiifiyo saabuun dhexdhexaad ah, oo lagu nadiifiyo maro qoyan oo jilicsan; natiijada ugu fiican, fadlan si fiican u qalaji
Cabbirka Kartoonka 465*240*150mm
Miisaanka guud Qiyaastii 1kg
Sanduuqan kaydinta bambo-ga dabiiciga ah ayaa si fudud u habayn kara meelo yar yar ama meelaha jikada oo dadku ku badan yihiin kana fogaadaan jaahwareerka. Ku haboon miiska miiska, armaajooyinka, armaajooyinka kaydinta cuntada, iwm waxaa loo isticmaali karaa qoyska oo dhan, waxaa loo isticmaali karaa xafiisyada guriga, qolalka farsamada gacanta, qolalka jiifka, musqulaha, dharka dharka/salada caadiga ah iyo garaashyada; aad ugu haboon guryaha, dabaqyada, dabaqyada, qolalka jiifka, caravans, kabinada iyo Camper
Hore: Sanduuqa kaydinta bamboo dabool leh ayaa kaydin kara bacaha shaaha iyo kafeega
Xiga: Bamboo Abaabul Saxaarad ka kooban 4 Qaybood
Sanduuqa Qabanqaabiyaha Kaydinta Bamboo Iibinta ugu Fiican
Sanduuqa kaydinta bamboo dabool leh ayaa kaydin kara shaaha ...
Sanduuqa Kaydinta Bamboo (Bamboo Dabiici ah)
Sanduuqa kaydinta khaanadaha bamboo (6 qaybood)
Qabanqaabiyaha Drawerka Golaha Wasiirada iyo Sanduuqa Kaydinta Qaybi...